विवाहको तयारीमा थिए ओम, कसरी भयो निधन ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
विवाहको तयारीमा थिए ओम, कसरी भयो निधन ?
२६ पुष,२०७३ | Agency
दिवंगत ओम पूरीकी श्रीमती नन्दिताले सोमबार पुलिसलाई बयान दिएकी छिन् । उनले ओमको निधन सामान्य नभएको भन्दै पुलिसलाई आत्महत्या या हत्या ? त्यसको पूर्णरुपमा जाँच गर्न अनुरोध गरेकी छिन् । नन्दिताले आफ्नो र ओमको सम्बन्ध सामान्य हुँदै गएकोे भन्दै यस्तो अवस्थामा ओमले आत्महत्या गर्न नसक्ने बताईन् ।
त्यस्तै अर्कातिर ओम पूरी पहिलो पत्नी सीमासँग विवाह गर्ने तयारीमा भएको खबर पनि थियो । दोस्रो श्रीमती नन्दितासँग केही बर्षअघि अलग भएका ओम, उनीसँग कानुनी रुपमै अलग हुने सोचमा थिए । तर छोराका कारण ओम नन्दिताको टचमा थिए । ओम नन्दितालाई प्रत्येक महिना तीन लाख रुपैयाँ खर्च स्वरुप दिने गर्थे । नन्दिता ओमको लोखण्डवालामा रहेको फ्ल्याटमा बस्दै आएकी थिईन् ।
ओम र नन्दिताको डिभोर्सकोे सुनुवाई १५ जनवरीमा थियो । तर त्यो भन्दा अगाडि नै ओमले यो संसार छाडे । डिभोर्सका लागि उनीहरुको बीचमा आठ करोडको सम्झौता भएको थियो
पहिलो पत्नीसँग विवाह गर्ने तयारीमा थिए ओम
ओम पहिलो श्रीमती सीमासँग पुन विवाह गर्ने योजनामा थिए । उनी विवाहको तयारीमा जुटिसकेका थिए । विवाह गरेर एक बर्षमा नै एकअर्काबाट अलग भएका उनीहरु जीवनका अन्तिम दिनहरुमा एक साथ जिउन चाहन्थे । बिगत दुई बर्ष यता उनीहरुले धेरै जसो समय एकसाथ बिताउन थालेका थिए ।
ओम र सीमाबाट सन्तान छैनन् तर नन्दिताले भने एक छोरालाई जन्म दिएकी छिन् । छोरालाई सिनेमा र उच्च शिक्षाका लागि ओम विदेश पठाउन चाहन्थे । यहि कारण उनी नन्दितासँग टचमा थिए ।
शुक्रबार बिहान आफ्नै फ्ल्याटमा मृत फेला परेका ओमको टाउकोमा गहिरो चोट थियो । ६६ बर्षिय उनको टाउकोमा डेढ ईन्च गहिरो र ४ सेमी लामो घाउ देखेपछि धेरैलाई उनको निधन सामान्य नभएको आशंका छ ।
दिवंगत ओम पूरीको विवादित वैवाहिक जीवन
बलिउड अभिनेता ओम पूरीको शुक्रबार बिहान हृदयघातका कारण निधन भएको छ । करिअरमा सफल र भर्सटाईल अभिनेता ओम पूरी केही विवादित बयानहरुका कारण ..